IMagnum PUBG yokuHamba ngokuHamba 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
magnum I-PUBG Mobile (yesiphelo) kugula
Sebenzisa iPUBG yeSelfowuni yeMagnum yesiphelo ukuba uzilahle ngokulula iintshaba.
Thatha uvavanyo lwe-PUBG Mobile yabucala yeMagnum yeHack-Thenga iMveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje.
Kutheni ungazonwabeli iindlela zakho zokugenca kwi-PUBG Mobile ixesha elide? -Thenga isiPhumo seMveliso yeVeki e-1 namhlanje!
Yiba lilungu eliqinisekisiweyo losapho lweGamepron ngePUBG Iselfowuni-Thenga iNyanga eli-1 yeMveliso ePhambili namhlanje!
I-PUBG Iselfowuni inokuba namandla njengenguqulelo "yesiqhelo", yiyo loo nto ukusebenzisa iihacks ezifanelekileyo kusabalulekile. Zibeke kwindawo yamandla ngokufumana ukufikelela kwi-PUBG Mobile Magnum Emulator!
I-PUBG Iselfowuni (i-Emulator): Ingcaciso yabucala yeMagnum
Ukudlala iPUBG Mobile kwi-emulator kukuvumela ukuba usebenzise nayiphi na into ongathanda ukuyenza, efanelekileyo kwabo bafuna ezona zibonelelo zinkulu zinokubakho. Ngelixa abantu besokola ukudlala kwizikrini zabo zefowuni, uya kuba usebenzisa ezona zibalaseleyo zePUBG zeHacks ezijikeleze (kwaye uzisebenzise kwiscreen sekhompyuter!). Ungathembela kwi-WinThatWar ukuhambisa ezona hacks zibalaseleyo, nokuba ungowuphi umdlalo. Ngelixa abanye ababoneleli banokulibala malunga ne-PUBG Mobile, sizisa ubushushu ngako konke ukukhululwa! Ukungena ngaphandle kokukhathazeka kunye nokuthenga ukufikelela kwi-PUBG Mobile yabucala yeMagnum Hack namhlanje!
Njengoko unokufumana nakwezinye i-PUBG Mobile hack, esi sixhobo sibonisa uMdlali we-ESP (i-Bone-Boxes kunye ne-Snaplines), umgama weTshaba, uLwazi lweNtshaba (iMpilo kunye neZikrweqe), kunye ne-PUBG Mobile Aimbot enomdla. Ngeenjongo ezi-Smooth kunye ne-FOV Circle (phakathi kwezinye izinto), le PUBG Mobile Cheat ibonelela kakhulu.
I-Aimbot (Bamba okanye itshixe ngokuzenzekelayo)
I-Smooth kunye ne-FOV enokwenziwa ngokwezifiso
Injongo yokukhetha ithambo
Ukulandela umkhondo weemoto
Malunga ne-PUBG yesiphelo seselfowuni: iMagnum yabucala
Kukho kubonakala ngathi zininzi kakhulu iiPUBG zeHack Hacks onokuthi ukhethe kuzo xa uqala ukujonga kwimarike, kodwa ukuba aziveli kwiWinThatWar, ungabawela kuluhlu. Olu qhekeko lunayo yonke into oyifunayo ukuthumela iintshaba zakho zibaleka zisoyika, kodwa kulungile kuba uzakuzingela kungekudala emva koko! Iphuhlisiwe ukuze isetyenziswe Windows 10 oomatshini, ii-CPU ezixhaswayo zizixhobo ze-Intel kunye ne-AMD, ngelixa ii-GPU ezixhaswayo ziyiNvidia kunye ne-AMD. Nangona ungayifumani i-HWID Spoofer ngokuthengwa kwale mveliso, siyazinika ukuba zithengiswe eWinThatWar!
Kutheni usebenzisa i-PUBG Emulator: iMagnum yabucala ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Ukuba uqhele ukusebenzisa izixhobo ezikushiya ufuna okungakumbi, awuzange uzame i-PUBG Mobile Cheats enikezelwa yiWinThatWar. Asinakulinga ukuba liqabane kunye nabaphuhlisi abangakhange babukhathalele ubugcisa babo, yiyo loo nto sikwazi ukudibanisa abathengi bethu ngeyona PUBG Mobile Hacks esemgangathweni. Uhlala ungcono xa usebenzisa imali yakho kwiWinThatWar ngokuchasene nayo nayiphi na enye indawo kuba umthengi uyinkosi apha. Zonke iiPUBG zeHack Hacks zikhuselekile nge-100%! Ukubeka iakhawunti yakho emngciphekweni yinto eyadlulayo xa ukopela kwi-PUBG Mobile yabucala yeMagnum yeHack.
Useto lweemenyu zomdlalo ongaphakathi-umdlalo alusoloko lukhona, yiyo loo nto iPUBG yeSelfowuni yaBucala yeMagnum yeHack ngokuzenzekelayo iphakamile kuninzi. Ungalutshintsha useto lokuqhekeka nangaliphi na ixesha ngelixa udlala, oko kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuvala usetyenziso! Ezinye zexabiso eliphantsi le-PUBG Mobile Cheats ohlangabezana nazo
Nokuba yeyiphi na edweliswe kakhulu kwimidlalo yomdlalo, okanye ayizukubeka enye kwaphela; Yiyo loo nto eyenza iWinThatWar umboneleli # 1 wePUBG weeFree Cheats kwi-Intanethi! Akukho sidingo sokuzabalaza ngokuseta, ukufakela, okanye ukumiliselwa kwePUBG yeMfihlo yaBucala yeMagnum yeHack, njengoko yonke into ithe ngqo (kwaye okona kubaluleke nangakumbi, isendleleni).
Sebenzisa i-emulator ukuqhuba iPUBG Imfono kuya kuvumela abasebenzisi ukuba badlale ngegundane kunye nekhibhodi, kunye nokwenza zonke izinto ezimangalisayo ezibandakanyiweyo kwiPUBG yeMagnum yeHack yeHack.
Sukuzabalaza ukudlala kwiscreen sefowuni kwaye usebenzise i-GamePron ukuze uhlale phambili.
Ilindelwe Lawula kunye nefowuni yethu yePUBG (i-Emulator) -Magnum yabucala?
PUBG Hack ngu Syndi
Umlo we-2042 Hacks nguHyperion